June 30, 2018 - Written by Editor
Agaasimaha shaqaalaha ee xafiiska Ra’iisul-wasaaraha, Fitsuma Arega ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in golaha wasiiraddu ay u gudbiyeen baarlaamaanka qaraar kooxaha ONLF, OLF, iyo Gibnot looga saaryo liiska argagisada.
Agaasimaha ayaa sheegay in go’aankanu u kooxahan ku dhiirigalin dooni inay hab nabad ah isticmaallaan si ay u gaaraan hadafkooda siyaasadeed.
Arega ayaa sheegay in golaha wasiiraddu uu ansixxiyay sharci cafis lagu siinayo shaqsiyaad iyo kooxaha ku lugta lahaa dagaalka hubeysan ee ka dhanka ahaa dowladda.
Ururka ONLF ayaa so dhaweeyay go’aanka dowladda Ethiopia. Madaxa warfaafinta ONLF oo Eritrea ku sugan ayaa VOA khadka taleefonka ugu sheegay in go’aanka looga saarayo liiska uu yahay tallaabo wanaagsan.
ONLF iyo OLF ayaa sannado badan waxay dagaal hubeysan kula jireen xukuumadda Addis Abbaba.
Khubarada ayaa aaminsan in tallaabadan ay tahay mid dhinaca wanaagsan loo qaaday, balse waxay khuburaddu sheegayaan in kooxahan ay u baahan yihiin wax badan oo lagu qanciyo ka hor inta aysan hubkooda si rasmi ah dhigin.
243,961 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress